Waa maxay qaybta gaarka ah ee ugu sahlan ee raadinta qalabka raadinta guryaha?
Maalmahan, wax ka badan intaan dadka ka hor intaysan dadku bilaabin internetka markay raadinayaan guryaha iyo guryaha cusub. Waxay faa'iido u yeelan doontaa milkiilayaasha ganacsiyada in ay ogaadaan in ku dhowaad 90% iibsadaha guryaha ay tixgeliyaan website-yada guryaha mulkiilaha ilaha ugu qiimaha badan ee macluumaadka marka ay timaado iibsashada guri ama raadinta guryaha.
Wixii milkiilayaasha ganacsatada ee doonaya boggooda internetka ee macaamiisha si ay u barwaaqoobaan oo ay u helaan gaadiidka badan, abuura istaraatijiyad guuleysta SEO waa. Maanta, waxaan ku siin doonaa xeeladaha ugu fiican ee lagu hagaajin karo website-kaaga guryaha.
Tilmaameyaal tallaabo tallaabo ku saabsan Getting Your Estate Real Estate Website ee ugu sareeya Raadinta Google
Goobaha Hagaha ee Degaanka
Sida laga soo xigtay tirakoobka, 70% iibiyeyaasha guryaha ayaa bilaabay raadinta iyaga oo leh erayo muhiim ah oo maxaliga ah, sida "hantiilaha California. "In kastoo adeegaha ugu badan ee adeegyadiisu adeegsadaan gobollo badan, markaad bilowdo boggaga internetka, waxa fiican inaad xoogga saarto magaalada hoose oo aad ganacsi sameysid marka hore. Inta badan khubarada SEO waxay soo jeedinayaan in aad ku hagaajin karto goobtaada raadinta guryaha ee guryaha oo leh magaca magaalada iyaga ku jira.
Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ka dhigaya website-kaaga kheyraad. Tusaale ahaan, bogga sida "Ku noolaanshaha Kalifonta," waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan xannaanooyinka iyo dugsiyada, daqliga dhexe, heerka dembiyada, tirakoobka faa'iidada leh ee celceliska guriga, iwm.Xasuuso, boggaaga internetka waa inuu noqdaa mid wacyi gelin ah oo macquul ah. Waxay u shaqeysaa sidan soo socota: Goobta websaydhka ee aadka ujirsan ayaa ah, fursadaha ugu sarreeya ee qiimeynta sare ee SERPs.
Ku buuxi boggagaaga bogga leh mawduucyo xiiso badan iyo qiimo leh
Sida ugu wanaagsan ee loo wadi karo gaadiidka dabiiciga ah ee boggaaga si aad ugu cusbooneysiiso bogaggaaga bogagga leh waxyaabaha xiisaha leh si joogto ah. Khabiirada SEO waxay kugula talinayaan in aad ku qorto qoraalada blogyada ku yaala guryaha aad jeceshahay inaad iibiso. Mid kasta oo ka mid ah qoraallada blogka waa in ay bartilmaameedsadaan cinwaan gaar ah, kuwaas oo iibsadaha guryaha laga yaabo inay raadinayaan isticmaalka Google.
Maadaama cinwaanka uu noqonayo erayga ugu muhiimsan, u tixgeli inaad u isticmaashid sharraxa meta, tag cinwaanka, tagska hoose iyo hubaal ahaan.
Marka abuurista iyo daabicidda qoraalkaaga waxaad hubisaa in mid kasta uu ka kooban yahay ugu yaraan 200 erey. Kaga soo bax sheekooyin gaar ah oo si faahfaahsan u sharaxaya sifooyinka hantidaada.
Samee Sawirada Tayada iyo Fiidiyowyada
Ka faa'iideysta sawirrada iyo fiidiyowyada. Qodobbada tayada sare ee hantida aad ka iibisid waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah sugidda mashiinka raadinta guryaha ee guuleysta. Xasuusnow, waxay yihiin waxyaabaha muhiimka ah ee ku lug leh guryaha guryaha. Kuwa iibsada guryaha ayaa jecel inay arkaan xayeysiin fiidiyow oo xiiso leh gudaha gudaha guryaha iyo guryaha cusub. Soo qaadista marqaatiyaalka fiidiyowyada waa fekrado aad u fiican oo soo jiidanaya dad badan oo booqanaya boggaaga.
Inkastoo ay ku habboontahay boggaaga qalab mobile
. Tirakoobku wuxuu muujinayaa in ku dhowaad 90% dadka dukaamada guryaha ee maanta isticmaalaya qalab mobile ah inta lagu jiro hannaanka iibsiga hantida. Iyadoo tirooyinkan maanka ku haya, waxaa muuqata in samaynta boggaaga mobile uu yahay qodob muhiim ah oo ka mid ah sugitaanka gawaarida raadinta guryaha. Naqshadeynta websaydhku waxay kaa caawineysaa inaad ka hor istaagtid tartanka kordhinta aragtida mashiinka raadinta. Maxaa ka badan, naqshad wax ku ool ah waxay kaa caawineysaa inaad ku kaydiso qiimaha maareynta mareegta bogga.
Waxaan rajeynayaa inaad ku riyaaqday talooyinkan faa'iido leh oo ku saabsan sida loo hagaajin lahaa hanti-dejinta raadinta bogga internetka. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, ha ka xishoon inaad la xiriirto kooxdeena Semalt Source . Waan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno!